क्यानेडियन लिगमा सन्दीपको उत्कृष्ट प्रदर्शन, प्रत्येक खेलमा विकेट ! – Everest Dainik – News from Nepal
क्यानेडियन लिगमा सन्दीपको उत्कृष्ट प्रदर्शन, प्रत्येक खेलमा विकेट !
काठमाडौं, असार २५ । क्यानडामा जारी ग्लोबल क्यानेडियन लिगमा नेपाली युवा लेग स्पिनर सन्दीप लामिछानेको बलियो प्रभाव कायमै छ । उनले चार खेलमा पाँच विकेट लिन सफल भएका छन् । सन्दीपआवद्ध मोन्ट्रेल टाइगर्स र टोरन्टो नेशनलबीच भएको गयरातीको खेलमा पनि सन्दीपको बलिङ उत्कृष्ट नै रह्यो ।
उनले चार ओभर बलिङ गरेर ३४ रन दिदै २ विकेट झार्न सफल भए । सन्दीपले क्यानडाका ब्याट्सम्यानद्वय नितिश कुमार र नभीन्नमिनेट धलीवालको विकेट लिएका हुन् । अन्य चर्चित बलरहरुले हरेक खेलमा विकेट नलिएको अवस्थामा सन्दीपले भने लगातार खेलमा विकेट झार्न सफल रहे ।
टस हारेर पहिले ब्याटिङको निम्तो पाएको टाइगर्सले निर्धारित २० ओभरमा ४ विकेट गुमाउँदै १७६ रन बनायो । उसका लागि गेवर्जे हेरिक वर्करले ६२, कनस्टाटिनो हेनरिक्वीसले ५० र धयनी स्मिथले १८ रन बनाए । अन्य ब्याट्सम्यानको सम्झनलायक प्रदर्शन रहन सकेन ।
टोरोनट नेसनल्स्का लागि मोहम्मद सामीले ३ र किरण पोलार्डले एक विकेट लिन सफल भए । १७७ रनको विजयी लक्ष्य पाएको नेसनल्सले निर्धारित ओभरमा ९ विकेट गुमाउँदै लक्ष्य भेटायो । उसका लागि नितीश कुमारले सर्बाधिक ४६, एन्टोन डेभिस ४३, किरण पोलार्ड ३७ र करमन अक्मलले १९ रन बनाउँदा अन्य ब्याट्स म्यानको प्रर्दशन सम्झनलायक भएन ।
बलिङमा टाइगर्सका लागि लाथिस मालिङ्गा र पिटेर सिड्डीले समान तीनतीन, सन्दीप लामिछानेले २ र कनस्टाटिनो हेनरिक्वीसले एक विकेट लिए । पाँच खेलमध्ये एक खेल मात्र जितेको टाइगर्सको आगामी यात्रा करिव सकिएको छ । प्रतियोगितामै दुई मेडन ओभर गर्ने सन्दीप पहिलो खेलाडीसमेत हुन्।
यो लिगको लागि सन्दीप छैटौं चरणमा छानिएका थिए। भारतम सम्पन्न इन्डियन प्रिमियर लिग (आईपीएल) लिगमा दिल्ली डेयरडेभिल्सबाट खेलेका सन्दीप क्यानाडाको लिगपछि आगामी अगस्टमा क्यारेवियन प्रिमियर लिग (सीपीएल) खेल्नेछन्। -एजेन्सी
ट्याग्स: sandeep lamichhane, ग्लोबल क्यानेडियन लिग